Madaxdii golaha militariga Sudan oo ka tanaasulay xilkii halka maalin ay hayeen… – Hagaag.com
Madaxdii golaha militariga Sudan oo ka tanaasulay xilkii halka maalin ay hayeen…
Wasiirka Difaaca Sudan Gen. Cawad bin Auf ayaa ka iclaamiyey telefishanka caawa oo Jimco ah inuu ka tanaasulay madaxnimada golaha militariga ee ku meel gaarka ah oo la sameeyey kadib markii xukunka la afgembiyey Madaxweynihii hore Cumar al-Bashiir, waxaa loo doortay Gen. Abdel Fattah al Burhan inuu bedelo Auf.
Go’aanka bin Auf ayaa yimid hal maalin kadib markii uu ku dhawaaqay in la afgembiyey Al-Bashir lana xiray isla markaana la sameeyey gole militari oo xukunka haya muddo labo sano ah, iyada oo la hakiyey dastuurkii dalka. bin Auf ayaa loo dhaariyey inuu yahay madaxa golaha militariga ee ku meel gaarka habeenkii Khamiista.
Abdel Fattah al Burhan ayaa ahaa baaraha guud ee Militariga Sudan, wuxuuna maamulayey ciidanka Sudan ee qeybta ka ah howlgalka militari ee isbaheysiga ee dalka Yemen, horey wuxuu u soo noqday taliyaha ciidanka lugta.
Magaciisa ayaa markii hore loo badinayey inuu noqon karo murashaxa ku dhowaaqi doona qoraalka ama bayaanka koowaad.
Sidoo kale Cawad bin Auf ayaa ku dhowaaqay isla caawa in Gen. Kamal Abdel Maruf oo ku xigeen u ahaa asna ka joogsaday qabashada xilkaasi.